केहि गफ गाफको कुरा - Own Things ~ आफ्नै कुरा
केहि गफ गाफको कुरा
प्रकाशित गरिएको मिति : 24 March 2010
माघको जाडो ...त्यसमा सिमसिमे पानि परिरा'छ ..एकोहोरो तालमा..., खना खाएका जुठा भाडा बर्तन त्यतिकै ... लडीरा'छ मलाई नै हेर्दै ! आम हड्ताल भएका ले - आज बस गाडीहरुको हर्नले हैरान पार-या छैन - शान्त छ देश ( हामीले खोजेको जस्तै ) ! कलेज लागेन - पढाई बन्द ! पार्ट टाइम जब छैन अनि वेरोजगारी र फुर्सदिलो भएर गफियो ...हेर जागरूप युवाले समयको सदुपयोग गरेको ! मान्छेहरुले अफिस धाउनु परेन , अनि रमिते हुन् सडकमा निस्किए ... कति खेर , काहा , के हुने हो भनेर ? अनि भन्छन आज कति मज्जाको दिन भो !
महिनामा करीब ७ / १० दिन आइ लाग्ने विशेष दिनहरु (हर्ताल) को सदुपयोग गर्न (गर्या' गर्यै हो ) ! घनिन्द्र श्रेष्ठ , शान्तिराम निरौला , संजय ढकाल , टिका राम श्रेष्ठ , विनोद भट्टराई र म भएर मस्त गफ गरियो ! गर्न सक्ने र हुने नै त्यहि मात्र थियो ! खुब आदर्श , भावनात्मक र यथार्थताको कुराहरु पिटर बसिम !
" वास्तबमा हामि नेपालमा काम नभएर र हामि सिर्जनशील नभएर नै यसरि फोकट्या समय विताउन उद्त रहन्छौ ! " ...
हामि छत बाट ...घरि सडकको गल्लि त, घरि नजिकैको चिया पसलमा भेला भएका मानिसहरु लाइ हेरिरा'थिम ! "उ हेर त ! मान्छेहरु कसरि बेकम्मा भएर गफ दिन भ्या'छन !" -विनोद ले के भन्न भ्याएका थिए शान्ति राम वोले :- "आफ्नो रोजगारीको लागि सानो सिर्जना पनि छैन अनि काम नभए पछी के गर्ने , जागिर पाइदैन ! "
" वाह ! हेर त्यहा हिड्दै गरेका छप्किहरु ... क्या छ यार ! " - संजयले जिब्रो पड्काउदै भने (हामीलाई उतै हेर्ने संकेत गर्दै ) ... घनिन्द्र झन के कम .. "हाइ , हेल्लो ! सोल्टिनी !" ( हाहाहा ...... हाहाहा ) केटाहरु कति छिटै रसिलो भए ... उर्छिंकल बुङ्गा न परिम !
( एक छिन चुप चाप के के हेर्दै बसिम ) नेताहरु कराउदै थिए एउटा सानो भेला गरेर दमक चोकमा र प्रहरीहरु डण्डा लिएर घुम्दै थिए - झडप होला जस्तो !
"आजकल देशको स्थिति र यो नेताहरुले बाड्ने आश्वासन र ब्यबहार देख्दा मलाइ त यस्तो भान भै सक्यो कि ! नेता भन्ने वितिकै सबै माहा च्युत्या हुन्छन " - मेरो मुख बाट प्वाक निकिहल्यो -यो कुरा ! यसरि नै हामीले दिन भर जसो राजनैतिक, प्राविधिक, सामाजिक, नैतिक आदर्शक आदि विविध प्रसंगका कुराहरु गरेर बस्यौ ! वेला-वेलामा हामिले आफ्नो जीवनमा भएका घटनाहरु एक अर्का विच पालै पालो सुनाउने पनि गरियो .. (फुर्सदिलो व्यक्तिको व्यस्त कुरा ) ! अनि निकै वेर सोच्यौ - मानिसहको पेट नभए कस्तो हुन्थ्यो भनेर ? यो सब यहि पापी पेट ले गर्दा –यत्रा जात्राहरु भैरा’छ !
...... सबैको कुरा सुनेर मलाइ यस्तो लाग्यो कि हामि बेकार नाना भातिका कुरा गर्छौ र मान्छौ ! काम (Job) आफै उत्पति हुने या कुकुरले बच्चा जन्माए जस्तो (एकै पटक ६/७ ओटा ) जन्मिने भए पो सबैलाई काम (रोजगार) मिल्छ ! त्यो त आफैले सृजना गर्नु पर्छ ! हामीले एउटा मात्र कार्यको थालनी गर्ने हो भने अरु उप-कार्यहरु त्यसै उत्पन्न हुन्छ ! त्यसैले सृजना (परिश्रम ) गर्ने गरौ , काम भनेको जस्तो सुकै सानो भए पनि गर्नु पर्छ तर ठुलो र सुविधा जनकको काम पाइने आश भने त्याग्नु हुन्न ! यसरि नै .... खुलेर नै समलिंगी , सेक्स, आदि इत्यादिका सब कुराहरु गरेर बसिम .... (गफ त हो सजिलो हुन्छ अनि किन , नगर्नु ) !
समलिंगी - महिला र पुरुष दुवै हुन्छन र समलिंगी भनेको विपरित लिंगी प्रति आकर्षित नहुने अर्थात केटा केटा संग र केटि केटि संग सेक्स सन्तुष्टि लिनेहरुलाई समलिंगी व्यक्ति भनिन्छ ! अनि समलिंगीको समाज पनि हुन्छ ... र यस्तो पनि हुन्छ भनेर थाह पाउदा - आफुलाई निकै आश्चर्य लागेका कुरा पनि गरियो ! हामीलाई थाह थियो कि उनीहरु विपरित लिंग प्रति विकर्षण र एकै खाले ( आफु जस्तै ) लिंग अनुरुप खोज्दछन , त्यसैले बाल ब्रह्मचारी (आजीवन अविवाहित रहने ) -पहिले देखि अहिले सम्मका सबै प्रति शंका गर-यौ ! पकै पनि उनीहरु समलिंगी थिए या समलिंगी भएका हुनाले अविवाहित (जीवन संगी विना) रहन सके ! त्यसैले पहिला पहिला ब्रह्मचारिहरु मात्रै भएर छुट्टै जंगलमा बस्दथे (मानिसको बस्ति देखि टाढा) र उनीहरु पक्कै पनि आफु आफु मिलि सम्भोग क्रिडा गर्थे कि ? तर त्यस्ता माहात्माहरु प्रति हामीले यस्तो आरोप लागाउनु धार्मिकरुपले वा हाम्रो वेद, गीता र उपनिषद् ले हामीलाई धिकार्ला ! तर पनि हामीले धेरै नै विश्वासका साथ यो शंका गरौ कि उनीहरु समलिंगी नै थिए !
मैले चाही यति सम्म भने कि पक्कै पनि समलिंगी थिए र’त ब्रह्मचारीको रुपमा रहे तर जहा सम्म सम्भोगको कुरा छ त्यो त समय र मन मिले सायदै हन्थ्यो होला ! नपत्याए ब्रह्मचारी हुन् ऋषि भएर बस्नेहरु धेरै अप्सराहरु संग लसपस भएको काहानी पुराणहरुमा पढ्न पाइछ ! किनकि उनीहरु समलिंगीको आचरण भएका थिएनन् र त त्यस्तो गरे जुन ऋषिहरुमा समलिंगीको आचरण रहेको थियो उनीहरुले त्यस्तो सम्भोग को प्रयास नै गरेनन नि ! र उनिहरु ब्रह्मचारी नै रहे ! हामि केटा केटा मात्र भएकाले यति खुलेर कुरा गर्यौ कि हामि पश्चिमा भन्दा फ्र्यांक्ली भएका थियौ ! हुन् त केटि केटि हुदा पनि यस्ता कुरा निकै गमेर जान्छ अरे भन्ने सुन्या थिम (कहा सम्म साचो हो थाह भएन ) ! तर यस्तो कुरा गर्न चाहि संजय अरु भन्दा निकै आघि रहेको थियो ! हामीले यस्तो कुरा पनि गर्यौ कि , हामि केटा केटा (मनमिल्ने ) हुदा मात्रै यस्तो कुरा गर्छौ तर अपरिचित व्यक्ति , त्यस्तै आफूभन्दा ठुला व्यक्ति (अभिभावक) हरुसंग साथै कुनै पनि नारि अगाडी किन यस्तो खुलेर कुरा गर्न सक्दैनौ र हिच्किचाउने, लजाउने गर्छौ ! आखिर कुरा यथार्थ हो अनि लुक्ने कुरा पनि होइन - हामि सबै संग मानवत्व रहेको छ र थाहा पनि छ ! यो सब जाँदा जान्दै थाह हुदा हुदै पनि किन यस्ता कुराहरु खुल्लारुपमा गर्न सक्दैनौ ? हाम्रो के जान्छ यस्ता कुरा गर्दा र डराउछौ ?
आखिर नैतिकता नफाली चरित्र जोगाए त भै गयो नि , हैन र ? यस्ता सेक्सुअल कुरा सबैलाई नभई नहुने कुरा खुल्ला रुपमा गर्ने गरे यसबाट उत्पन्न हुने धेरै जस्तो समस्या आफै हाल हुने थियो ! यस्तै यस्तै धेरै कुराहरु गरेर बस्यौ .....नेता सेता भन्दा कम साना कुरा गरेनौ , हुन् त काम नभए नि कुरा सानो गर्ने मान्छे त परिनम (हाहाह ... ) ,
साझ सबै आ -आफ्नो तिर लाखापाखा .... लागियो तर वेलुका किचेन हेरेको त ..मट्टीतेल रहेन’छ पर्यो फसाद ! दिउसो गफ न थियो, निकै ठुला ठुला गरियो ... समस्या आफ्नो (भोकै सुत्नु पर्ने भो ) – अनि दोस ... साला सरकार ! नेता सब स्वार्थि ! यो सिस्टम नै खतम ! ..........
(.....तर त्यति खेर जति र जस्ता कुरा गर्यौ त्यति अहिले मैले यहाँ लेखीन किनकि म पनि त्यति खुल्लेयाम छैन ... जति त्यति खेर कुरा गर्दा थिए ! र जति कुरा गरेका थियौ उति सबै उल्लेख गर्ने हो भने यो बेद को अर्को बेद (पौराणिक धार्मिक पुस्तक) नै सिर्जना हुने थिए ! उसै त लामो भै सक्यो ! पढ्नै झ्याउ लाग्ने गरिको ! )
दिनेश राज said... March 24, 2010 at 12:56 PM
बेदनाथ जी , हाम्रो दिनचर्या नै त्यस्तै भएको छ । नेपालमा पनि हाम्रै केहि साथिहरुमै पनि यस्ता ब्यक्ति हुनुहुन्छ जसले समयको पूर्ण सदुपयोग गर्नु भएको छ र कामहरु भ्याइनभ्याइ गरिरहनु भएको छ । औसत नेपालीको दिनचर्या चाहिं हामिले भोगेजस्तो हैनर ? समाज अनुसार त्यहाँको रिति अनुसार धेरै कुराहरु बाँधिएका हुन्छन् खुल्दैनन् त्यस्को लागि समय कुर्नु नै सबैभन्दा सजिलो उपाय हो जस्तो लाग्छ । सेक्सको बारेमा खुलेर कुरा गरेपनि , नगरे पनि ठूलै परिवर्तन हुने कुरा पनि त हैन नि । हाहाहा
Ashesh said... March 25, 2010 at 6:54 AM
कुरो सहि गर्नुभयो । नेपालीको आम प्रवृति नै यस्तै हुन्छ । अनि तपाईले गर्नुभएको समलैङ्गिकताको कुरा पनि धेर थोर चित्तै वुझ्यो । यसलाई एकथरी मान्छेले विकृतिको संग्या दिएता पनि पूर्ण रूपमा वेठिक हो जस्तो चैँ मलाई लाग्दैन । हो नि हामीले खुलेर कुरा गर्न सक्नुपर्यो यस वारेमा ।
अनि लेखाई नि रमाईलो छ है ।
Chaitanya said... March 27, 2010 at 2:41 PM
बेदनाथजी, हामी नेपालीहरु र मैले बुझेसम्म दक्षिण एसियाकै मानिसहरुको एउटा ठुलो बिशेषता छ, त्यो के हो भने नि हामी आफैंलाई वाक्क आउन्जेलसम्म पनि बेफ्वांकका गफ मार्न सक्छौं | बेलुकी आफैंलाई नरमाइलो लाग्ने हदसम्म गफ गरेको मेरो आफ्नै पनि अनुभव छ|कुरा त क्रान्तिकारी पनि गर्छौं कहिलेकाहीं,तर साँच्चिकै अघि सर्न भने हामी डराउँछौं | तसर्थ क्रान्ति हाम्रो आकर्षण मात्रै बन्छ, ध्येय बन्दैन |
Jotare Dhaiba said... March 27, 2010 at 8:53 PM
निकै रमाइलो शैलीमा नेपाली जनजीवनको वास्तविकता खोतल्नुभयो । राज्यले युवालाई कामको अवसर दिन सकेको यतिको भद्रगोल स्थितिको चुल्ठोमा देश पक्कै बाटिने थिएन । अरूको मुलुकमा निन्यारो अनुहार पार्दै श्रम बेच्नुपर्दैनथ्यो । त्यो श्रम हाम्रै आर्थिक विकास र औद्योगिक समृद्धिका लागि खर्चिन सकिन्थ्यो । तर नीतिनिर्माताको हातमा नीति छैन, फोहोरी राजनीति मात्र छ ।
काम भएको फोसटमा समय नष्ट गरेर को नै बस्थ्यो होला । माओवादी द्वन्द्वले उग्र रूप लिनुमा पनि समान अवसरको अभाव, बेरोजगारी प्रमुख कारक हुन् भन्ने कुरा हामी बाट छिपेको छैन ।
खलनायकहरू भएसम्म यस्तै हो वेदनाथ जी, देशको चीर हरण जारी रहनेछ ।
Basanta said... March 29, 2010 at 8:24 AM
हाम्रो सामाजिक यथार्थको सटीक चित्र गर्नुभएको रहेछ यो लेखमा। बेरोजगारीनै हाम्रो समाजको सबैभन्दा ठूलो महारोग हो।
पछिपनि यस्तै लेखहरु पढ्न पाउने आशा छ।
Asha said... April 2, 2010 at 11:30 PM
NAPOKHEKAA WAA POKHAAUNA NAKHOJIYEKA JIWAN CHAKRAKO SAJIB CHITRAN ..